Kuburitsa - Kiyi yebvudzi rako kukura nekukurumidza | Bezzia
Kuburitsa ndiyo kiyi yekuita kuti bvudzi rako rikure nekukurumidza
Susana godoy | 07/04/2021 12:00 | Runako
Haisi nguva yekutanga kuti tide kuona kuti vhudzi redu rinokura sei nekukurumidza. Zvakanaka, zvirokwazvo iwe watove wakaneta zvishoma nekutsvaga ese marudzi emhinduro dzayo. Nhasi tichaona chimwe chakanyanya kuitika, icho chatinacho pamunwe wedu asi pamwe hatisi kugara tichichipa kukosha kwazvinotakura chaizvo: exfoliation.
Nekuti sezvinoitika mune mamwe muviri, exfoliation chiitiko chinozovandudza ganda redu zvakanyanya. Imhaka yeizvozvo kana tichifunga nezvebvudzi, kana kuti pachinzvimbo cheganda, haisi kuzosiiwa kumashure. Iwe unoda kuziva here matanho aunofanira kutevera?
1 Nei exfoliation iri kiyi yekukurumidza kukura kwebvudzi?
2 Bvisa ganda remusoro nekofi
3 Shuga nemafuta emuorivhi kune vhudzi rako
4 Shuga uye ndimu
Nei exfoliation iri kiyi yekukurumidza kukura kwebvudzi?
Sezvatinoziva chaizvo, exfoliate ndeyekuonekana nemasero akafa. Naizvozvo, patinozviita paganda, isu tinobvisa zvese zvakawandisa, kuti tiwane nzvimbo yekuvandudza. Mune ino kesi, chimwe chinhu chakafanana chinoitika nekuti izvo zvatinozoita kuburitsa ganda redu, iro rinogara richiida. Iyi inzvimbo inonamira mafuta kuti iungane muzviitiko zvakawanda, nepo kune mamwe kuoma. Nekunaka kwakanaka tichange tiri kubatsira ganda munzvimbo ino, kutaura zvakanaka kune zvimwe zvigadzirwa zvisaririra izvo dzimwe nguva zvinoramba zviri mubvudzi uye zvichikurudzira kutenderera kuti iro bvudzi ritange kukura rakasimba kudarika nakare kose. Unogona kuona zvese izvi nekutenda nekushandisa mimwe mishonga yemusikirwo yatinofunga.
Bvisa ganda remusoro nekofi
Kofi poda ndeimwe yemishonga inoshandiswa zvakanyanya patinenge tichida kuwedzera. Uye zvakare, icho chigadziro icho isu tese tine kumba zvechokwadi. Nekudaro, isu tiri kuzoda 4 mashupuni ekofi kuti titange kugadzirira musanganiswa wedu. Asi kuitira kuti iko kukwiza kuve kwakakwana uye kuti zvakatove nyore kwatiri, hapana senge Sanganisa iyo kofi nemapuni maviri eiyo yogati yechisikigo kana kana iwe usina, kafuta kokonati. Zvekuti izvi zvinotibatsira zvakanyanya kana tichiita kukwiza muviri. Izvi zvichave nezvigunwe zvemunwe, pasina kushandisa kumanikidza kwakanyanya uye kuvhara nzvimbo yese mushe.
Shuga nemafuta emuorivhi kune vhudzi rako
Imwe sarudzo yekuita exfoliation ndeyekutibatsira neshuga. Ma granite ako anotisiirawo mhedzisiro yakanaka yekufunga. Asi ichokwadi kuti tichagara tichifanirwa kuibatanidza nechimwe chinhu, kuti igosvetukira zvirinani paganda. Mune ino kesi, ichave iri mafuta omuorivhi. Sezvatinoziva chaizvo, izvi iri basa rekupa hydration, mukuwedzera pakubvisa mhando dzese dzemarara uye nekutipa isu antioxidants. Iyo imwe yemafungiro atinoda kuve akareruka kuita uye nemhedzisiro yayo yakanaka.
Shuga uye ndimu
Mushonga uyu wakanakira vanhu vane mafuta ane dehwe reganda. Nekuti sekuziva kwedu ndimu ichave inoona nezve kudzora sebum. Saka nazvo, shuga ichasvika, inozove zvakare nebasa rekudhonza tsvina yese yatiinayo. Pamushonga wakadai, hapana chakaita kuve neyakaenzana yeimwe chinhu uye imwe. Zvakare, yeuka kuti ndimu iri mubvudzi rako, kana iwe ukawana zuva, inogona kuita kuti ireruke. Nekudaro, aya marudzi emafungiro anogara achiitwa zvakanaka panguva yehusiku kana tisisiri kubuda. Bvudzi rako rinofanira kunge riine hunyoro kana iwe uchienda kunorishandisa. Kubva pano, iwe unotanga neyaka tenderedzwa masaja uye mushure memaminetsi mashoma, iwe unogona kusuka bvudzi rako senguva dzose. Iwe zvechokwadi uchaona mhedzisiro yayo nekukurumidza!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Kuburitsa ndiyo kiyi yekuita kuti bvudzi rako rikure nekukurumidza
Inflatable Jacuzzi: Unoziva here mabhenefiti ayo makuru
Maguta mashanu muFrance kwaungade kugara